PUNTLAND nasiib daranaa Diktatoor-Damiin-Dhabadhilif
PUNTLAND nasiib daranaa! Diktatoor-Damiin-Dhabadhilif
H. M. Samatar.
Dadka ku nool gobollada hadda loo yaqaan Puntland ayaa isla soo qaadeen inay aayahooda ka tashadaan sannadihii 1994-98. Ayada oo arrintu soo dhawdahay in la sameeyo maamul haga arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee gobollo dhowr ah ayaa waxaa dhacay shirkii qab-qablayaasha ee Qaahira 1997. Waa tii ay shirka ka caroodeen Cabdullahi Yusuf iyo Adan Gabiyow. Ayadoo oo ay markaas soo dhowdahay unkidda maamul goboleed ayaa Cabdullahi oo ka caraysan wixii rag reer Muqdisho ah, oo ay hadda xulifo yihiin, ku sameeyeen qaylo dhaan la yimid gobollada iyo to'llayeey meesha ha laga kaco.
Wada tashigii in maamul la sameeyo waxaa afduubay Cabdullahi Yusuf oo wata taageerayaal badan oo uu si caaddifad ah uga kasbaday ka bixiddii shirkii Qaahira. "Cabdullahi waa ninka kaliya ee ka dhiidhiyey shirqoolkii Qaahira", ayey ahayd waxa markaas dibnaha lagu hayey. Ciduna ma ogolayn in la is-weydiiyo Cabdullahi ma nin dantisa faas u sitaa mise waa mid danta dadkiisa u taagan. Waxaan la ogolayn in la soo qaado in Cabdullahi isagoo darajo doon ah uu dadkiisa ku talo diiday, Caydiidna hoos fariistay 1994.
Waxaa Cabdullahi Puntland u afduubay inay u noqoto jaran-jaro uu ugu tillabo Xamar iyo Villa Somaliya oo uu ahaa hammigiisa 1aad ilaa lixdamaadkii. Ilaa hadda arrimaha Cabdullahi Puntland ka samaynayo waxay maalinba maalinta ka dambaysa sii xoojinayaa doodda ah Cabdullahi Puntland inay maamul taabbagalo noqoto ma doonayne wuxuu doonayey in Xamar durbaan iyo bigil loogaga garaaco. In badan baa ku oran gabadhayadu guur ma yeelateen haddii aan Cabdullahi masraxa siyaasada soo gelin. Waan garan waayey waxa guurka gabadhaha iyo mingiska Cabdullahi ka dhexeeya. Waxaan isaga qaatay inay qayb ka tahay sababha Somaliya mushkiladdan raagtay uga bixi la'dahay � caaddifad aan meel jirin iyo dantii qaran oo la isku laray.
Intii Cabdullahi joogay Puntland wuxuu ku waday diktatooriyad qayaxan waxaana lagu qiyaasay in ilaa kun qofi Puntland ugu dhimatay loollan xukun raadis ah laga soo bilaabo 1991 iyo markii Cabdullahi Xamar u huleelay. Diktatooriyaddii Cabdullahi waxaa beddelay Cadde Muuse oo la isku wada raacsanyahay inuu yahay nin magaciisa iyo dhaqankiisu ay u kala duwan yihiin sida magaciisa iyo muuqaalkiis u kala duwan yihiin. Cadde waa nin maskiin ah aysanna ahayn inuu siyaasad galo. Waa nin aan garan karin sida wax u socdaan ilaa xeero iyo fandhaal kala dhacaan. Waa nin "wax la arko" ee loo sheego run u qaata, markaasna asagoo tilaabooyin badan qaaday garta inaysan wax ka jirin wixii loo sheegay.
Cadde wuxuu dhaxlay maamul kharriban oo uu yeelay in awoodda madaxweyne ay weli ku sii dambayso Cabdullahi Yusuf oo lacagta iyo ciidanka Puntlland toos u maamula. Waxaa muuqata inay ku habbon tahay hadalka ah ninkaad ka qaadan kartid baa ushaada loo dhiibtaa. Waxa kaliya ee Cadde fahmay waa in Cabdullahi meesha qabyaalad ku haystay. Waxaa muuqata in si xad-dhaaf ah ay u buux-dhaatay naas-nuujinta Cadde ee beesha uu ka dhashay. Waa dhici kartaa inaysan ka badnayn tii Cabdullahi ee waxaa Cadde soo bandhigaya malaha waan laga filayn arrin noocaan oo kale ah inuu sameeyo shakhsi aad loogu hanweynaa �waanse la aqoon..
Aan soo koobee Cadde waa ka dhib yaryahay Cabdullahi Yusuf oo wax dhici doona ma aynu naqaane, ilaa hadda arrimo siyaasadeed cidu uguma dhiman Puntland. Waxaase muuqata in Cadde yahay nin garaad yar, ama ay awooddisa maskaxeed (Intelligence) ay aad u yartahay � waxaa la oran karaa waxaa Puntland hadda ku jirtaa xilligii daminiinta. Hadalkaasi Cadde kaliya ma aha ee Madaxweyne ku xigeenka markuu yaraa waxaa la oran jiray Xasan-dibi. Cadde iyo Dibi, labaduba waa ku liiteen waxbarshada. Taasaa keentay in Cadde ciidanka galo Dibina Ruush aado.
Sidii ummadda Puntland ay tahay meel ilaah nacay, waxaa haddu u soo tafaxaydanaya inuu Cadde meesha ka riixdo Xassan Abshir Faarax. Xassan wuxuu ka soo jeedaa caa'iilo reer Garoowe ah ee aad loo ixtiraamo, asaguse waa nin meel walba u galo siduu mansab sare u heli lahaa. Waxaad dhici karta inay dareenkiisa kharibtay markii asagoo aad u da' yar uu Xamar ka noqday Maayar. Sida dadka badankiisu sheegayaan Xassan waa nin aan mabda' lahayn oo wax walba u sameyn karo siduu darajo ku gaari lahaa. Ma aha siyaasaddu inaad noqtid duqsi meel walba ee qoyaan leh daf yiraahda. Bal eeg kartuunka Amiin Amiir ee soo baxay bishan July dhexdeeda. Wuxuu Xassan ku tilmaamayaa labo-wajiile. Aniga waxaan oran lahaa Xassan waa Daba-dhilif, inkastoonan jeclayn isticmaalka ereyga oo dhul-yaal ka noqday saxaafadda Somaliya..
Miyaan Puntland la oran karin waxay soo martay Diktatornimo, waxay ku jirtaa Damiinimo, waxaa u soo socota Dabadhilifnimo. Waxaa kale oo Puntland looga sheekaystaa in canshuurta masaakiinta beerka Cabdullahi lagu daweyn jiray, kaddibna kalyaha Cadde meesha soo galeen, waxaa hadda laga yaabbanyahay in Xassan oo la liita macaan (diabete) uu u arko Puntland meesha kaliya ee uu ka heli karo cadkii jirkiisa ka fariista (spareparts).
Afeef � qoraalkan waxaan qabaa inay ku xumaanayaan dadka aan taa-taabtay, hase ogaadeen ayagaa siyaaso galay, nin durbaan tuntana cilaaq dalbay weeye xaalkoodu ee sidaas ha isku qanciyeen.